Raaxo badanaa ! Pique iyo Shakira Oo isku kor shumiyay Xayawaanka loo yaqaano Hoonbaro - iftineducation.com
iftineducation.com – Raaxo badanaa ! Pique iyo Shakira Oo isku kor shumiyay Xayawaanka loo yaqaano Hoonbaro
Wali waxaa fasax kooxohoda ugu maqan qaar ka mid ah ciyaaryahanada ugu laacibka san aduunka , waxaana ka mid ah dafac raaxada u go’ay ee kooxda Barcelona Gerard Pique kasoo nolosha ku xertay fananada qoob ka ciyaarka badan ee Shakira.
Daafac xoogan ee dalka Spain ayaa soo dhigay bartiisa bulshada ee tweeterka sawir isagoo la dawaalanayo gacalisadiisa kadibna action cusub oo shumiska ku kor alifay mid ka mid ah xayawanada ugu bilacda qurxoon bada ee loo yaqaano hoonbaro .
Pique ayaa hada ku wajahan xeebta Hawaii si eey ugu qoraxeestan isaga iyo Shakira ka hor inta eey ku laabanin dalka Spain uu isugu diyariyo xili ciyaaredka cusub .
Barcelona aya macalin cusub dhawan u magacawaday Gerardo Martino waxaana horyalkeeda cusub la ciyaari doonta kulanka ugu horeeyay ee horyaalka La Liga kooxda Levante.